"असमर्थित" म्याकमा म्याकोएस मोजाभ कसरी स्थापना गर्ने म म्याकबाट हुँ
ती कम्प्युटरहरूमा म्याकोस मोजाभ स्थापना गर्ने एउटा तरिका छ जुन एप्पलले आधिकारिक रूपमा अपडेट गर्दैन र आज हामी ठ्याक्कै के हेर्न जाँदैछौं। यस मामलामा, महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ कि यो केहि जटिल प्रक्रिया हो र यो त्यति सरल हुँदैन जस्तो कि एप्पलले आफैंले हाम्रो असमर्थित म्याकमा स्थापना गर्न अनुमति दियो।
सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि विकासकर्ताले आफ्नै उपकरण सिर्जना गरेको छ जुन हामीलाई कम जटिल स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ, तर योसँग पनि यो साधारण प्रक्रिया होईन र तपाईंको चरणहरू आवश्यक छ। प्याच अपडेटर भनिने प्याच अपडेट गर्न उपकरण पनि जोडियो, यी चीजहरूमा सराहना गरिएको केहि।
को यस भिडियोमा dosdude1 हामी आधा घण्टा भन्दा कममा प्रक्रिया सरल तरीकामा देख्न सक्छौं। म्याकोओएस मोजाभको स्थापनाको लागि, आवश्यकताहरूको एक श्रृंखला आवश्यक छ कि हामी भिडियो पछाडि छोड्छौं र स्पष्ट रूपमा स्थापनाको लागि डसडुडे १ द्वारा बनाईएको प्याचलाई। १GB जीबी युएसबी स्थापनाकर्ता चाहिन्छ। हामी भिडियोको विवरणमा यो सबै फेला पार्नेछौं र हामी तिनीहरूलाई भिडियो मुनि पनि छोड्छौं।
म्याक प्रो, iMac, वा म्याकबुक २०० 2008 पछि
MacPro ३, १
म्याकबुक एयर वा म्याकबुक Unibody एल्युमिनियम पछिल्लो २०० 2008 वा पछि
म्याकबुक एयर १०.१
सेतो म्याक मिनी वा म्याकबुक २०० early पछि
२००serve को शुरुवाती वा पछिल्लो संस्करण
म्याक सूची जुन यो प्रणालीसँग पनि उपयुक्त छैन स्थापना तिनीहरू छन्:
२००-2006-२००2007 म्याक प्रो, आईम्याक, म्याकबुक प्रो र म्याक मिनी
केवल २०० i iMac7,1 लाई मात्र समर्थित छ यदि CPU लाई Penryn- आधारित कोर २ डुओमा अपग्रेड गरिएको छ, जस्तै T2007
MacBook4,1 -MacBook एयर २०० 2008 (MacBookAir1,1) बाट
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको उपकरण हो प्याचर उपकरण म्यानुअल र भिडियो विवरणमा फेला पर्‍यो। यदि तपाईंलाई थप जानकारी आवश्यक छ वा चरणहरू हातमा छन्, तपाईं विकासकर्ताको वेबसाइट देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं फेला पार्नुहुनेछ यो सबै स्थापना पुस्तिका म्यानुअल। अब तपाईसँग सबै कुरा छ तपाईको म्याकोलाई म्याकोओएस मोजावेले समर्थन गरीरहेको छैन र तपाई यो स्थापना गर्न लायक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने जिम्मामा हुनुहुन्छ।
हामीले यस macOS Mojave स्थापना प्रक्रियाको बारेमा के भन्ने छ यो सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि होईन किनकि यो स्थापना प्रक्रिया सरल छैन र यो ग्राफिक्ससँग मिल्दो समस्याहरूको कारणले हाम्रो म्याकमा राम्रोसँग काम नगर्न पनि सक्छ, वाइफाइ जडान, ब्लुटुथ, ट्र्याकप्याडमा असफलता वा असफलता हुन सक्छ। समान यो त्यस्तो कुरा हो जुन विकासकर्ता र ट्यूटोरियलका सिर्जनाकर्ताले हामीलाई बताउँदछन्, त्यसैले यो त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीमा म्याकोस मोजाभ खराबीहरू देखा पर्‍यो भने।
अर्कोतर्फ, म उपकरणमा स्थापना सल्लाह दिदिन जुन दैनिक प्रयोग, काम वा उपर्युक्तको लागि समानको लागि आवश्यक छ। त्यसो भए पहिले भन्न सक्दछ कि सामान्य भन्दा अलि बढी जटिलता स्थापना हुनुको साथै, सबै कुरा हाम्रो म्याकमा पूर्ण रूपमा काम नगर्न सक्छ म्याकोस मोजाभलाई समर्थन बिना। यो स्थापना कार्य नगरीकन प्रत्येकको दायित्व हो र सोया डी म्याक टोली स्थापनाबाट आउने कुनै समस्याहरूको लागि जिम्मेवार छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » "असमर्थित" म्याकमा म्याकोएस मोजावे कसरी स्थापना गर्ने
जोसेप पेरेज भन्यो
सबै भन्दा पहिले तपाईको योगदान को लागी धन्यवाद।
यी चरणहरू अनुसरण गर्दै मैले मेरो iMac १२.२ मा मोजाभ स्थापना गरेको छु र विधिले काम गरेको छ, तर रिसेट पछि स्क्रिनले सबै र colors्गहरू परिवर्तन देखाउँदछ।
म कम्प्युटर ग्राफिक्स को साथ केहि असंगति हुनु पर्छ कल्पना।
तपाईं समाधान को लागी सोच्न सक्नुहुन्छ?
जोसेप पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
प्रश्न लायक हुन्छ? र धेरै प्रदर्शन हराउनुहुन्छ? किनभने अद्यावधिक गर्दा, हामीलाई यो चेतावनी दिन्छ कि यो असफल हुन सक्दछ र स्क्र्याचबाट सुरु गर्नु पर्छ, प्रदर्शनको कुरा हुँदैन।
मैले यो २०१० को मध्यबाट एक इमेकमा स्थापित गरेको छु र रंगहरू परिवर्तन भएका छन् र ग्राफिक्सहरू खराब छन्। जब विन्डोजहरू सार्दा तिनीहरू लक हुन्छन्।
नमस्ते। मलाई पनि त्यस्तै समस्या छ। रंगहरू बदलिएका छन् र रातो हराइसकेको छ। कुनै समाधान?
म उही समस्यामा छु, तपाईंले कुनै समाधान भेट्टाउनुभयो?
म सामिल छु, उही चीज मलाई र others्गका साथ अरूलाई हुन्छ
Pikuko लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यो ढिलो २०० Mac म्याकबुक यूनिबडीमा स्थापना गरेको छु र यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। मैले यसलाई २०१० म्याकबुक एयरमा पनि स्थापित गरें, र यो पनि राम्रो काम गर्दछ। के तपाईंले स्थापनाको अन्तमा प्रत्येक मोडेलको लागि प्याच विकासकर्ता द्वारा सेट विकल्पहरू प्याच गर्नुभयो?
हो, यसले कार्य गर्दछ, यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दैन, यो तपाइँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ, सबै कुरा तपाईको लागि काम गर्दछ वा गर्दैन। यो धेरै ढिलो हुन्छ, र प्रणाली पहिलो दिनमा क्र्यास भयो। यसले समानान्तरहरू, न त भर्चुअलबक्समा काम गर्दछ, जबसम्म यो विन्डोज एक्सपी हुँदैन। मैले ओएस एक्स एल क्यापिटानमा फिर्ता जानुपर्‍यो र सबै कुरा ठीक थियो, जे भए पनि धन्यवाद, तपाईंले प्रयास गर्नु पर्‍यो। म्याकबुक प्रो १″ ″ .17.२ मध्य २००।। एसएसडी GB जीबीको र्याम सब भन्दा बढी यसले सुसज्जित पार्न सक्छ। यसलाई स्थापना गर्नु अघि यसको बारेमा सोच्नुहोस्। अभिवादन
म्याकबुक प्रो १» लेट २०११,
ग्राफिक्स: इंटेल HD ग्राफिक्स 3000 512 एमबी,
प्रोसेसर: २.2,4 GHz Intel Core i5
१g जीबी र्याम र एसएसडी
समस्या बिना नै स्थापित गरिएको छ, तर अन्य प्रयोगकर्ताहरूले के भने, ग्राफमा प्याचको साथ मैले याद गरिन। तर यदि पीसी, भर्चुअलबक्स र अन्य विकास वा डिजाइन प्रोग्रामहरू धेरै ढिलो छन् भने, मँ तपाईंलाई भन्दिन।
म वास्तवमै डार्क थिम मनपराउँछु जुन उनीहरूले मोजावेमा प्रस्तुत गरेका छन्, तर, यो मेरो लागि लायक छैन कि म हरेक दिन म्याकमा काम गर्दछु, मेरो ल्यापटपको लागि यो अत्यन्तै नराम्रो अनुकूलित छ।
प्याच +१ को विकासकर्तालाई ठूलो योगदान!
रुबेन रेस भन्यो
एक म्याकबुक प्रो २०११, मोडेल .2011.२ मा Mojave स्थापना गर्नुहोस्। प्रमुख जटिलता बिना। मैले प्याच विकासकर्ता प्रक्रिया अनुसरण गर्‍यो। जे होस्, त्यसो गर्ने निर्णय गर्नेहरूको लागि, मोजाभ स्थापना गरेपछि यो सुरु हुँदैन, तिनीहरूले USB बाट स्थापनासँग बुट गर्नु पर्छ र प्याच चलाउनु पर्छ, यो विन्डोको अन्तमा हुन्छ जुन तल बायाँ भागमा खुल्छ। त्यहाँ तिनीहरू तपाईंको म्याकको मोडेल खोज्दछन् र सम्बन्धित प्याच लागू गर्दछ। वास्तवमा, मेरो मोडेलको मामलामा, समर्पित रेडेन ग्राफिक्सले एक्सेलेरेसनको साथ काम गर्दैन। मैले फाइनल कट प्रो संस्करण १०..8.2. install स्थापना गर्ने प्रयास गरें र यसले भन्छ कि ग्राफ समर्थित छैन। जहाँसम्म, यस उही डेवलपरको अर्को ट्यूटोरियल अनुसरण गर्दै मैले रेडियन ग्राफिक्स र भोइलालाई असक्षम गरें जुन एकीकृत ग्राफिक्स जुन इंटेल एचडी 10.4.5०००, फाइनल कट प्रो, पछिल्लो संस्करण अपेक्षाकृत राम्रोसँग काम गर्दछ। तर हो, समर्पित ग्राफिक असक्षम गर्दा, चमक नियन्त्रण काम गर्दैन वा ढक्कन बन्द गर्दा निलम्बन गर्दछ। एक अर्कोको लागि। अन्तमा, सबै कुराले मैले भनेको कुरा बाहेक कार्य गर्दछ, तपाईं अझै पनि ग्राफ अक्षम नगरीकन यसलाई छोड्न सक्नुहुनेछ तर फाइनल कट जस्ता प्रोग्रामहरूले काम गर्दैन। अरूले तर्क प्रो एक्स ठीक काम गर्दछ र प्रदर्शन एकदम राम्रो छ, उच्च सियराको सपनाको तुलनामा दश गुणा राम्रो जुन मेरो कम्प्युटरमा कहिले पनि राम्रोसँग काम गरेन।
रुबान रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
जोसे कार्लोस भन्यो
म्याकबुक प्रो २०० mid को मध्य
फ्यूजन ड्राइव १.१२ टीबी
यो धेरै राम्रो हुन्छ। स्क्रिन रंग समस्याहरू पहुँच स्क्रिन विकल्पहरूबाट पारदर्शिता विकल्प हटाएर समाधान गरिन्छ।
काम नगरेको केवल चीज iSight क्यामेरा हो कि हराइरहेको रूपमा सूचीबद्ध छ।
प्रदर्शन एकदम सहज छ, किनभने किनभने यो मोडेलको ग्राफिक्स एक nVidia हो र ATI होईन। बाँकी कम्पोनेन्टहरू महान छन्।
जोसे कार्लोसलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस, तपाईलाई कुनै सल्लाह दिएर हामीलाई यो कसरी गर्ने भनेर एक ट्यूटोरियल दिनको लागि? म अन्तिममा ग्राफिक्स पहुँच गर्न सक्दिन। फोटोहो उत्कृष्ट चल्यो तर म कुनै सम्पादन कार्यक्रममा छवि देख्न सक्दिन।
एलेजेन्ड्रोलाई जवाफ दिनुहोस्,।
तपाईंले स्थापना फाइल कसरी डाउनलोड गर्नुभयो? AppStore मा यसले मलाई भन्छ कि यो समर्थित छैन र मलाई डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन।
Dude लाई जवाफ दिनुहोस्
ल। मैले भर्खर देखेको कि यो प्याचरसँग डाउनलोड गर्न सकिन्छ
मसँग एक म्याकबुक प्रो २०११ छ, १″ इन्च चाँडै २०११
प्रोसेसर: २.2.3GH3 इंटेल कोर i5
मेमोरी: GB जीबी १8 mH1333 DDR3
ग्राफिक्स: इंटेल HD ग्राफिक्स 3000 512 एमबी
MAVERICKS ओएस एक्स 10.9.5
म जान्न चाहान्छु कि तपाईं म्याभरिकबाट मोजाभमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ? र यदि यो गर्न सक्दछ भने, यो कसरी गरिन्छ जब यो App Store बाट डाउनलोड गर्न उपलब्ध छैन ???
ECM लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, तपाईले कम्प्युटरमा एप्पलका अनुसार स्थापना गर्न सक्नुहुने अधिकतम हो:
म्याकोस उच्च सियरा १०.१10.13.6. ((१G जी )17)
लेखको ट्यूटोरियल अनुसरण गर्दै, मलाई थाहा छैन यदि तपाईं त्यो टोलीमा मोजाभ पास गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि तपाईंले गर्नुपर्दछ
यो मेरो लागि एकदम राम्रो काम भयो! म्याकबुक एयरमा २०११ को मध्य आईर र रामबाट २ जी।
एप्लाइड प्याचेस कार्य गर्दछ र सबै ठीक छ, उच्च सिएरा भन्दा राम्रो
म Mojave को एक प्रतिलिपि कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु?
Jachs लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं dosdude1.com ट्यूटोरियल अनुसरण गर्नुभयो भने, तपाईं हराउनुहुने छैन। तपाईं पनि त्यहाँबाट Mojave बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
म यसलाई २०० Mac म्याकबुक प्रो (१ G जीबी र्याम र एसडीडी) मा प्रयोग गरिरहेको छु र सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै ठूलो समस्याहरू छैनन्। मैले भन्नु पर्छ कि म अफिस वा फोटोशप वा त्यस्तै केहि प्रयोग गर्दैन। मलाई चाहिने साना कार्यालयको लागि, क्लाउडमा Google प्रोग्रामहरू छन्, मैले छोडेको साथ।
जे होस्, मसँग सोध्न प्रश्न छ: बारम्बार यसले मलाई भन्छ कि मैले बिग सुरमा अपग्रेड गर्नुपर्दछ, जुन म गर्न चाहन्न, कम्तीमा अहिलेसम्म हैन। र मलाई गम्भीर शंका छ कि यो सुरु हुन सक्छ। तर यस अद्यावधिकलाई स्वीकार नगरी, यसले मलाई बाँकी अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिदैन जुन मलाई चासो लाग्दछ (मोजावेका लागि सुरक्षा प्याचहरू, प्रिन्टर अद्यावधिकहरू, आदि ...)। कुनै सुझाव?
जूलियसलाई जवाफ दिनुहोस्
tvOS १२.०.१ अब सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ